I-Intel yokugqibela i-Oasis Hack 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
Intel I-Oasis yokugqibela
I-Oasis Intel yesiphelo sisisombululo esigqibeleleyo somntu wonke ofuna "uncedo" oluthile.
Yiva amandla e-Oasis Intel yokugqibela kwaye ubone ukuba yintoni malunga nayo. Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Fumana ukufikelela kwi # 1 ye-Oasis yokugqibela oza kuyifumana kwi-intanethi. Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje!
I-Gamepron ingonwabi ngakumbi ukukhonza abathengi ngalo lonke ixesha lifuneka. Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Akunyanzelekanga ukuba ungene ungaboni xa udlala iOasis Oasis, njengoko izixhobo zethu zinokukunceda ufumane ulwazi oluthe kratya malunga nendawo ekungqongileyo. Funda ngeendawo zotshaba kunye nezinye izoyikiso usebenzisa i-ESP enikezwe kwi-Last Oasis Intel.
Ulwazi lokugqibela lweOasis Intel
I-Oasis yokugqibela ngumdlalo wokuphila oza kuvavanya ukuthanda kwakho ukuba uphile, nangona ukusebenzisa iOast Oasis ye-Intel kusaza kwenza into elula ukuyenza. Ngelixa abanye beya kusokola ukuqokelela izibonelelo ezifanelekileyo kwaye balwe neenqanawa zabaphangi (kunye neentshaba ngokubanzi), abo kuni abanokufikelela kwi-Last Oasis Intel hack yethu akuyi kufuneka bajongane nayo nayiphi na loo nto. Endaweni yoko unokwenza i-Oasis Aimbot yethu yokugqibela kunye ne-ESP / Wallhack, ikunike izixhobo ezifunekayo zokuphelisa nantoni na enesibindi sokuma endleleni yakho.
Utshaba kunye nomba we-ESP (kunye neefilitha) unokufumaneka kule hack, kodwa sisiqalo nje eso! Kukho ukuKhangela okuBonakalayo okukuqwalaselayo, ke ngekhe ucinge ukuba utshaba luye phantsi ukubala okanye akunjalo. Ngokulula eyona Oasis yokugqibela ikhutshwe!
Malunga ne-Oasis Intel yokugqibela
Yinja eyidlayo inja xa udlala i-Oasis yokugqibela, kodwa ngombulelo, le mpazamo iya kwenza "ukuluma" kwakho kube namandla kuninzi. Awunyanzelekanga ukuba uthembe ukuba i-Oasis yokugqibela engaphuhliswanga kakuhle ekugqibeleni igqiba ekubeni isebenze ngokufanelekileyo, njengoko usebenza kuphela ngeendlela ezikumgangatho ophezulu (ezinje ngeOasis Oasis Intel) eza kukunceda uphephe iingxaki. Abasebenzisi bethu banako nokusasaza ngelixa sisebenzisa iihacks zethu, njengoko indlela yoSasazo ikulungele xa uzama ukuba sisilumko. Ungasisebenzisa esi sixhobo kwimowudi eskrinini esigcweleyo, kwaye uyakufumana eyongezelelweyo HWID Spoofer xa uthenga isitshixo semveliso.
Kutheni usebenzisa i-Last Oasis Intel ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli ngekhe bakuphathe njengathi, njengoko iGamepron izinikele ngokupheleleyo ekunikezeleni abasebenzisi bethu amava aluncedo. Le yeyona nto isenza sahluke kwabanye okhuphisana nabo, njengoko befuna nje ukufumana imali yakho kwaye bakushiye-sihlala sihlaziya izixhobo zethu, silwela ubukhulu ngako konke ukukhutshwa! I-Oasis yokugqibela i-Intel kufuneka ibe yeyona nto ibalaseleyo ye-Intel esekwe kwi-Oasis yokugqibela efumaneka kwi-Intanethi, kwaye siyinikela kubathengi bethu ngalo lonke ixesha befuna. Yenza ikamva lakho kwaye uzive ukuba kunjani ukugqwesa kwi-Oasis yokugqibela kube kanye! Ungazikhathazi ngokuziqhelanisa, izixhobo zethu zinayo.
Imenyu yomdlalo ongaphakathi kumdlalo eza kulandelwa sisixhobo sabanye abagcini, okuthetha ukuba uya kuba nakho ukuhlengahlengisa nantoni na oyifunayo xa kufikwa kuseto lwakho lokungena. Lungisa ukuba zinkulu kangakanani iinketho zeTshaba lwakho lwe-ESP kwiscreen, kunye nento oza kuyibona- unokuhlengahlengisa ukuba zeziphi ii-Item ESP eziza kubonakala kwiindawo eziqinileyo / ezi-opaque. Ukutshekishwa kokuBonakala kunokwenziwa (okanye kukhubazeke) kusetyenziswa imenyu yomdlalo ongaphakathi, ikuvumela ukuba ngobuqhetseba udlale "umsulwa" nanini na kufuneka njalo. Ubugcisa bamava akho ngokufumana ukufikelela kwi-Oasis yokugqibela ye-Intel ukukopela!
Njengokuba oko kwakungonelanga, ukhuseleko lukwangumba ophambili apha kwiGamePron. Ungathembela kuthi ukuba sihambise isixhobo esikhuselekileyo nesikhuselekileyo ngalo lonke ixesha, ngenxa yoko akukho mfuneko yokuba nexhala malunga nokuvalwa.
Ukuqhekeza ngobukrelekrele kunye nokufikelela kwi-Oasis yethu yokugqibela ye-Intel namhlanje!
Ilindelwe Lawula nge-Oasis yethu yokugqibela ye-Intel?